Roccat cram 16.8 miriyoni mavara muchanza cheruoko rwako neKone XP.
Roccat imhando yave iripo kwenguva yakareba sekunge ndanga ndichitamba paPC. Pavakatangisa iyo Kone yekutamba mbeva renji muna 2007, vakaita mafungu mumakwikwi esports chiitiko uye vakanakidzwa nekutanga mukurumbira.
Iye zvino pasi peamburera yemugadziri ane mukurumbira wekushongedza Turtle Beach, Roccat inosuma yazvino yekuwedzera kune iyo siyana, iyo Kone XP. An ergonomic wired gaming mouse ine inoyevedza RGB mwenje uye 29 programmable bhatani mabasa, akanakira MMO mitambo nezvimwe. Yedu Roccat Kone XP ongororo inoona kuti inofananidzwa sei nevanin'ina vayo muchikamu chimwe chete uye kana kutarisisa kweRGB kunokanganisa zvachose kubva pamhando yekuvaka.
Chinonyanya kukosha: Iyo yakanyanya kunaka MMO wired mbeva kutenderedza, Roccat yakagadzira yakagadzika mudziyo ine basa rakakura mumabhatani epadivi anorongwa. RGB-lover's dream mouse.
Super-ruvara, inoshanda RGB
Kugadzikana chimiro chekurudyi-ruoko
Yakanakisa Swarm app
Machinja asina kusimba
Tambo yakarukwa inodhonza mbeva isingaremi
Roccat Kone XP: Mutengo uye kuwanikwa
Iyo Kone XP inowanikwa ikozvino kuburikidza neiyo yepamutemo Roccat chitoro uye yechitatu-bato vatengesi, RRP $90. Iyo inojoinha huwandu hwavo huri kuwedzera hweKone mbeva, kusanganisira waya Kone Pro pamadhora makumi masere, uye isina waya Kone Pro Air pamadhora zana nemakumi matatu.
Sezvo Kone XP ichangotangwa, ingangove iri kutengeswa mune ramangwana. Kana iwe uri kufunga kufunga nezve kusimudzira mbeva yako munguva pfupi, funga kuisa iyo Kone XP pane yako yekuda rondedzero uye tarisa pamutengo.
Roccat Kone XP: Chii chakanaka
Mushure mekupedza makore akawanda kudaro ndine ambidextrous waya isina mbeva, ndakatarisa iyo Kone XP ndikashaya kuti ndaizonzwa ndakasununguka here nayo yakaumbwa chaizvo kuruoko rwerudyi. Roccat ainyatsonzwisisa basa iri nekuti pandakaisa ruoko rwangu pachunky mbeva iyi, yainzwa seyakagadzirirwa ini. Tave kutanga zvakanaka.
Kunyangwe nemabhatani manomwe makuru parutivi rwekuruboshwe rweKone XP, chigunwe changu chinokwana pasina kudzvanya chero chazvo. Iyo chete yaungafudza ibhatani rekuchinja-nyore rinowanikwa pazasi pechigunwe, iro nekusarudzika hariite chinhu riri roga, rinovhura mabasa echipiri kune mamwe macro mabhatani panzvimbo. Semuenzaniso, kubata bhatani riri nyore-kuchinja uye kurova rimwe rinogona kupihwa kune mutambo-chaiwo murairo kana wenguva dzose. Windows basa, kuvhura makumi maviri nemapfumbamwe bhatani mabasa, akakwana kune inorema-inorema MMO mitambo senge Final Fantasy XIV.
Kugovera mabasa kumabhatani makuru ane Roccat's Swarm software iri nyore, kupeta kaviri senzvimbo yekudzora yekupenya kweRGB mwenje mukati meKone XP. Chirongwa ichi chingaite sechinoomesera pekutanga, asi ndakaona kuti zvigadziriso zvakarongeka zvaive zvakanaka, kunze kwekukwidza mbeva, chimwe chinhu chandinowanzo tsvaga nekudzima chero mbeva. Kana iwe ukasarudza akasiyana ega-mutambo mbeva marongero, unogona kuchengeta anosvika mashanu emutambo profiles uye nekukasira chinja nebhatani rekutenderera bhatani rakananga pamusoro pegonzo. Yakanakira kushandura pakati pezvisungo zvehunyanzvi hwakasiyana mumitambo yakasiyana.
Yakakosha pamakwikwi emitambo, Swarm inosanganisira kuseta chaiwo hunhu hweDPI switcher, inodzorwa nekuwedzera uye minus mabhatani akananga kumberi kwekuruboshwe bhatani. Pamitambo isina kunyatsonzwa nezvezvombo zvega kana makirasi, iyi inomhanyisa DPI switch inoreva kuti ndinogona kubva paDPI yakakwira kuti ndigare ndichivavarira kuenda kune yakaderera-yakaderera yekupfura muvanopfura vanomhanya. Ehe, kana iwe uchida kuchengeta chigunwe chako pane chinokonzeresa, unogona kugoverazve mabhatani epadivi kune DPI switcher pachinzvimbo.
Kunze kwehuwandu hwesarudzo dzemabhatani muSwarm app itebhu yakaparadzana yeRGB marongero, kushambadza iyo Roccat AIMO yakangwara yekuvhenekesa sisitimu uye kuita iyo Kone XP runako rwakajeka neon. Iwe unogona kusarudza ruvara rwakasimba kana kusarudza pakati peakasiyana modhi, uchipuruzira muraraungu wemavara pakupenya kwaunoda uye nekumhanya. Ini ndinosarudza iyo wave set, iyo inotenderera zvishoma nezvishoma mavara ayo ichiratidzira mamwe macro mabhatani mabhatani. Yakanyanya kutonhorera, RGB-inotarisisa gamer ingave mune yavo chinhu pano.
Chinhu chakakosha chegonzo hombe mashandiro anoita vhiri, uye Krystal 4D vhiri rinoratidzwa paKone XP rakanyanya kunaka. Iyo yakareba uye ine chunky, iine kutenderera kwakasimba inonzwa chero notch sezvainotendeuka. Zvinofadza kushandisa mushure memakonzo akawanda ane mavhiri anonzwisa tsitsi anonzwa kunge svumbu rebhanana radhonzwa mumadhaka manyoro. Tichifunga nezve kunyunyuta kwangu nezve kushandisa mbeva yekurudyi yekurudyi inoita senge yaizonzwa kumba mumugwagwa wecyberpunk neon-wakafukidzwa, Roccat akandifadza nembeva yakagadzikana iyo isiri yekungo gimmicky kugogodza nekuda kweRGB. .
Roccat Kone XP: Izvo zvisina kunaka
Sezvandambotaura, ini ndiri fan wemakonzo asina waya, uye kazhinji anotakura huremu hwakati wandei nekuda kwezvikamu zvakaita semabhatiri emukati, saka iyo isingaremi Kone XP yanga isiri yekunzwa kukuru. Pa104g, iine mwenje wepamusoro mukuenzanisa nezvandakajaira, uye izvo hazvina kana pedyo nekuve yakanyanya kureruka mbeva kutenderedza. Icho chinhu chekufunga nezvacho kana ukada mbeva dzakakura, kunyanya sezvo iyi yakarukwa netambo yakarukwa, ichiitira kumwe kudhonzera kumberi kana yasimudzwa.
Pane nguva dzose kanenge kakunzwa kakudhonzera kumberi, zvisinei kuti tambo yakazorora sei.
Iyo "Phantom Flex" tambo haisi yakaipa chimiro cheKone XP. Zvakapesana nekuti yakaomarara, kureba, uye inofanirwa kuchengetedza tambo dzakadzivirirwa kubva mukuwedzerwa kushandiswa kwemakore. Iyo nyaya haisi netambo pachayo, asi Roccat achishambadza mbeva se "pedyo-isina waya chiitiko." Kuvakwa kwakareruka uye tambo yakarukwa zvinoreva kuti pagara paine kanenge kakunzwa kudhonzwa kumberi, zvisinei kuti tambo inozorora sei. Iyo yakawanda yekudzikira kune mbeva dzine waya kazhinji pane imwe nyaya yeKone XP, asi chokwadi chekuti mbeva iyi yakareruka kana ichienzaniswa netambo zvinoreva kuti ndaona kudhonza kunonzwa kakawanda kuti ndisaite hanya.
Nyaya huru neKone XP ndeye switch. Nekudadisa kuzivisa kushandiswa kwe "Titan Switch Optical" yavo tekinoroji, kudzvanya kunonzwa kushoma uye kuodza moyo. Tichifunga nezvemabhatani eparutivi macro ane mamwe mhinduro ari pachena kana adzvanywa, iyo huru yekudzvanya switch haina kusimba, kunyanya kubaya-kurudyi. Vanogona kumira miriyoni zana zvekutsikirira muhupenyu hwavo asi vasingape mhinduro yakakwana, uye zvinonyadzisa chaizvo kune mbeva iyo neimwe nzira inonzwa premium pamutengo wayo. Roccat akapotsa aita kuti ndigutsikane kuti ndidzokere kune mbeva ine waya, asi ndakapotsa mhinduro yakakura yekudzvanya kubva kune mamwe makonzo.
Chekupedzisira, iyo Roccat yekutumidza masisitimu inosekesa zvishoma. Ndakashandisa Kone XP kwemazuva mashoma akasimba ndisingazivi kuti AIMO mwenje inorevei payaiti "iripo mvura, inofemerwa nezvisikwa." Iyo mbeva inoshandura mavara uye inotaridzika kutonhorera. Sezvinobvumwa, maLED anoiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana mukati meKone XP uye anotaridzika zvakanaka mukushandiswa, asi kune nzira dzakareruka dzekuatsanangura. Yakajairika yekutamba-centric advertising, asi kana ikawana verbose iyi zvinongosekesa.
Roccat Kone XP: makwikwi
Kunze kwekukwikwidzana nerudo rwangu rwembeva dzisina waya, iyo Kone XP inomira ichipesana nemhando dzakafanana dzewaya muRoccat renji uye idzo dzemamwe mabhureki. The Roccat Kone Pro ine zvishoma zvishoma zvisingabhadharwi RGB mwenje, mabhatani mashoma, uye inorema kunyange yakareruka kupfuura XP.
The Razer Naga X yakafanana neMMO-centric wired mouse mumutengo wakafanana. Iyo ishoma kupenya ine mashoma eRGB mwenje asi inoshanda padyo nemabhatani epadivi anorongwa. Izvo zvinoenderana nezvauri kutsvaga uye kuti yakakosha sei RGB pakuseta kwako.
100m tinya rating Optical
70m tinya rating
Switch Owl-ziso optical
kumhanyisa 50G 40G
Kuvhota mwero 1,000Hz 1,000Hz
uremu 104g 85g
Iyo Kone XP inoratidzira yakanaka RGB matatu-dimensional yekuvhenekesa sisitimu, yakanyanya kunaka MMO-centric wired mouse iripo nhasi. Kushandisa mari shoma kuchareva mbeva inorema zvishoma kupfuura iyo Naga X, asi Roccat yakanyanya kukunda neiyi mbeva yakagadzikana.
Roccat Kone XP: Unofanira kuitenga here?
Unoda mbeva dzakareruka, dzine waya
Iwe unoda RGB mwenje mune yako accessories
Unoda akawanda programmable macro mabhatani
Unoda mbeva dzisina waya
Unonakidzwa nekutamba murima chairo
Unoda ma switch anorema ane tactile mhinduro
Roccat yakanakidzwa nekubudirira mumitambo yemitambo yemitambo neKone mbeva yavo, uye Kone XP haina mutsauko. Nepasi pemadhora zana, uchanetseka kuwana mbeva inofananidzwa neiyi basa rakawanda uye inopenya RGB mwenje. Mabhatani ari nyore kurongeka anoita kuti ive yakakwana kune MMO gamers neRoccat Swarm app.
Izvo hazvina kukwana, asi zvakazara iyo Kone XP inonakidza uye inomira kureba padivi pemamwe eiyo mbeva dzakanakisisa dzemitambo pamutengo uyu. Chero ani anotsvaga mwenje weRGB ane mavara achafara kana akasanetseka nekushandisa mbeva ine waya, uye mabhatani eparutivi senge DPI switcher anoratidza kukosha kwekukurumidza sensitivity shanduko mumitambo yeFPS.
Chinonyanya kukosha: Yakazara neRGB yekuvhenekesa uye mabhatani emabasa mazhinji, iyo Kone XP yakanakira MMO neFPS vatambi vanotsvaga mbeva ine mavara pasi pemadhora zana.
Yakanakisa yemitambo mbeva 2020: Iyo yakanyanya wired uye isina waya mitambo yemakonzo yemabhajeti ese
Roccat Kone Pro Mhepo ongororo: Pane gore pfumbamwe
ROCCAT Inozivisa Kone Pro Series Yekutamba Mouse
Kudzokorora | Tt eSports Ventus X RGB Gaming Mouse